अपराध बढेको सहर - परिहास - नेपाल
नेपालमै सबैभन्दा बढी अपराध हुने जिल्ला काठमाडौँ रे ! नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान शाखाले हालै यो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौँ नै नेपालको सबैभन्दा बढी अपराध हुने ठाउँ भन्ने रिपोर्ट आएपछि काठमाडौँबासी झस्केका छन् । काठमाडौँलाई त मन्दिरै मन्दिरको सहर भन्थे । भगवानै भगवानको सहर भन्थे । कसरी यति धेरै अपराध बढेको होला ?
तर यो कुनै आश्चर्यको कुरो भने होइन । किनभने काठमाडौँ अहिले त्यस्तो सहर बनेको छ, जहाँ घर नभएको कुनै नेता नै छैन भन्दा हुन्छ । सबै राजनीतिक दलका ठूला नेता यहीँ बस्छन् । प्रधानमन्त्री यहीँ बस्छन् । मन्त्री यहीँ बस्छन् । राज्यमन्त्री यहीँ बस्छन् । सहायकमन्त्री यहीँ बस्छन् ।
जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री होइनन्, उनीहरु पनि यहीँ बस्छन् । जो मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने लाइनमा छन्, उनीहरु पनि यहीँ बस्छन् । नेता यहीँ बस्छन्, कार्यकर्ता यहीँ बस्छन् । अनि यहाँ अपराध नबढे अरु कहाँ बढ्छ ?
प्रकाशित: भाद्र २४, २०७६
राष्ट्रपतिले कामै गर्न नपाउनु ?
संविधान संशोधनको बेला
नाचले फर्केला राजतन्त्र
देउवालाई रिस किन उठ्छ ?
तिहार र 'हार'
हामी यस्तै त हो नि ब्रो...
आलमका खातिर देउवाको चित्त दुखाइ